I-Heroes of Camelot APK inguqulo yakamuva ye-9 Ansoli - indima yamahhala yokudlala imidlalo ye-android
Ukulanda Okuphezulu Namuhla
Imidlalo Ekhokhelwe Ye-Android Mahhala
Imidlalo Engcono Kakhulu Yesaphulelo
Ukudlala Indima »
Download Heroes of Camelot for APK
Published & copyrighted by Gaea Mobile Limited
Funa futhi Camelot kusukela Black Knight. Joyina izinkulungwane abadlali kule RPG yabadlali abaningi empini ikhadi Game ukuthi kuhanjiswe wena ezweni elalibuswa yizindinganiso Dragons kanye Medieval izibalo basezinganekwaneni!
The Black Knight amaqhawe akhe undead angenele Camelot. King Arthur futhi Merlin mema konke eBrithani for Hero ukuze avuke. Ingabe uyoba le Hero?
Battle for okusinda ilibuyise amandla izwe lakho by ukuhlangana, socwaningo, bebe futhi beqiniseka namakhulu amaqhawe anamandla. hero ngasinye simelela ikhadi wanika amakhono nezinto amandla. Intuthuko Endleleni Okwakuhlelwa Ngayo emazweni ayishumi Arthurian bethola amakhadi eziyivelakancane in Camelot. Ifomu amaqembu amakhadi ezingavamile ukuba yilo combos amasu kanye linqobe izitha zakho. Ukuncintisana nezinkulungwane abadlali emhlabeni jikelele in a bukhoma PvP Arena, futhi yakha zezentengiselwano emhlabeni Camelot.
YIWAPHI kokuhlaselwa TEAM-EZISEKELWE
- Landela uhlelo Quest kuya ku-10 Arthurian eBrithani imizi kanye ezingaphezu kuka-80 izigaba
- Ekahle yakha up to amaqembu amathathu kanyekanye ukulwa Demons futhi Dragons
- Ithimba ngalinye kubanga combos eziyingqayizivele kanye namakhono. Ibutho yakho kufanele ibe onamandla kunayo yonke Territories Camelot sika!
- Yakha inhlangano, ukudala Crest ithimba lakho esingavamile futhi athole esikanye namaqhawe
- Hlola namandla party yakho ngaphakathi inhlangano yakho ku friendly Scrimmage combat
- Band ndawonye bese ufaka Boss agasele Camelot sika 3D etilongweni. Khetha ngokuqondile, side, emuva noma ukweba izikhundla attack ukuze avivinye amandla Boss '
HLAKULELA IBUTHO KWAKHO Heros
- Thuthukisa amakhono Hero ngalinye kanye Evolve wabayisa amakhadi enamandla futhi emangalisa
- Thola amakhadi eziyivelakancane ukuze embule amakhono esiyingqayizivele kunazo futhi visceral
PvP izimpi ARENA Camelot'S
- Veza amandla emphemeni yakho ku Arena the Camelot sika ancintisanayo nezinkulungwane abadlali emhlabeni jikelele in bukhoma PvP combat imicimbi. Kuphela abanqobi enamandla ngeke zijabulela imivuzo kanye ukutuswa ontanga yakho.
Hlela IN CHAT LIVE
- Joyina umphakathi Knights esikanye nawo ekuhluphekeni kwawo Druids ngokusebenzisa chat bukhoma ukuthola Grail Ongcwele!
Wenyukela amazinga amasha ukulwa Champions TOWER
- Uvule Caerleon Champions Tower uthathe inselele Camelot sika ezinzima kunazo okwamanje
- Hlola emgodini esiyingqayizivele ezingeni ngalinye kanye kutholakale imivuzo abalulekile noma kufihlwe boss izinsongo
- Zilungiselele! Kuphela heroes enamandla ngeke angene izibuya eliphakeme kakhulu. Ingabe ungakwenza kube kuya phezulu?
INkosi Arthur okwase kuyisikhathi eside ohlonishwa njengomholi iqhawe yaseBrithani, ukuhlinzeka ezweni ukujabulisa full of life, ingcebo nokuthula. Knights and Druids ngokufanayo yathola nokuzola omunye nomunye. Enomhawu simthande Arthur kuwo wonke, okubi Queen Morgana encintisana ukubhubhisa konke iNkosi evikelwe. Lapho bethola esifuze emnyama, Morgana ne-Black Knight iBrithani, enzelana ukupela kanye oqothulayo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba phambi kwabo.
I Merlin omkhulu acoce indzaba iqhawe in search of the Holy Grail - kwethemba yaseBrithani kuphela. Ukuze eBrithani ukuba abe nalokho eyake yaba yikho, ucingo ukuze izingalo is ngempela. King Arthur uye wabiza wonke Knights kanye Druid alekelelanayo ekufuneni a hero ukuze avuke. Kepha ngubani ongazibamba, ngiphindisele eBrithani futhi ukuthola Grail Ongcwele?
Landela @HeroesofCamelot izindaba zakamuva!
By ukulanda le game, uyavumelana nemigomo yesevisi, inqubomgomo yemfihlo kanye Isivumelwano License.
Download Heroes of Camelot 9.2.1 APK
Inguqulo Yamanje: 9.2.1
Isilinganiso Esimaphakathi: (1 out of 5)
Abasebenzisi Bokulinganisa: 369,653
Izimfuneko: Android 2.3.3+
Isilinganiso Sokuqukethwe: PEGI 12
Igama Lephakheji: com.kabam.newcnhoc
Heroes of the Legend
Legendary: Heroes Saga
Heroes of Empire:Death shadows
heroes of coke - clash of kings
Epic Heroes War !
Super Flash Speed Hero: Flash Games
Your goal is 3 to kill me